Qeylo-dhaantii doorashada oo dib u billaabatay | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya – Qaylo-dhaantii dorashada kurasta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka 11-aad ee JFS ayaa u muuqata mid dib u aloosmi karta, maalmo yar kadib markii la xalliyay khaladaad iyo tabashooyin hore u soo baxay.
Wasiirka Duulista Hawada Soomaaliya Duraan Axmed Faarax, oo degaan doorashadiisu tahay Puntland, ayaa durba sheegay in lagu tuntay heshiiska iyo habraacyada doorashada, isla-markaana la garab maray qaar ka mid ah nabaddoonnada jufooyinka wadaaga kursiga Hop166.
“Waxaan Shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada iska leh kursiga Hop166 u caddaynaya in si baal marsan habraacyadii doorashada ee lagu heshiiyay loo maamulay doorashada kursigaas, iyadoona Nabadoonnada beesha kursigu ka dheexyo aan wax door ah la siin”, ayuu yiri Duraan Axmed.
Wuxuu sheegay in maadaama Guddiga Doorashooyinka heer Puntland, oo ku daaban Siciid Deni, ay dafireen odayaasha dhaqanka aan marnaba la aqoonsan doonin xubnaha la qorsheegay in ay soo xulaan ergada kursiga.
“Xubnaha xulaya ergada iyo ergada ay soo xuleenba maahan kuwo haysta matelaad bulsho, waxaana arrintaas ku faahfaahinayaa Shir Jaraa’id oo aan siin doono warbaahinta Insha allah”. Ayuu hadalkiisa ku sii daray Wasiirka Duulista Hawada.
Kursigaan waxaa laga leeyahay gobolka Mudug gaar ahaan degmada Galdogob, waxaana baarlamaankii 10-aad ku fadhiyay Saadiq Warfaa, oo hadda aan rajo buuran lahayn, inkastoo xogo hoose sheegayaan inuu garab ka helayo RW hore Kheyre.
Deni, oo ka mid ah musharixiinta u tagaan baratanka krsiga ugu sarreeya dalka, ayaa kursigaan la doonaya Wasiirka Ganacsiga Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi, kaas oo gacan-saar la leh kooxda Aaran-jaan ee daaha gadaashiisa Puntland ka maamusha.
Duraan Axmed Faarax, wuxuu ka mid yahay Wasiirrada heer Federaal ee Farmaajo ku dhow, isla-markaana Deni, mucaaradka ku ah, waxaana la rumeysan ahay in ay adkaan doonto in Wasiiradda Duulista iyo Qorsheynta, Duraan iyo Jamaal, sanadkaan kuraas kasoo helaan Puntland.
Duraan, Sabtigii ayuu gaaray magalada Garowe, oo lagu dooranayo kursiga Hop166, hayeeshee, shan maalin uu ku sugan yahay xarunta Puntland, wuxuu u muuqdaa mid rajo dhigay.